News Blog of Indian Tagged "Caafimaad iyo Tababar" - THE INDIAN FACE
Tababar loogu talagalay freeride! Waxqabadka jireed ee ugufiican xilliga barafka!
Diyaar u ah xilliga barafka Freeriding ayaa dalbanaya, shaki kuma jiro taas! Labadaba marxaladaha koritaanka iyo soo-dejinta, fuushanuhu waa inuu lahaadaa taxane dhan oo ah xaalado jireed oo fiicnayn si uu ugu guuleysto ujeedooyinkooda. Shaki la'aan waa waqtigii la cusboonaysiin lahaa kanaga Muraayadaha indhaha oo u diyaar garow ficil! Akhriso oo ogow sida loo hagaajiyo farsamadaada freeride.
5 siyaabood oo jirkaaga loogu jimicsado buuraha
Ku noqo buur fudeed wanaagsan 5-tii jimicsi! Waa lama huraan tababar jidhkeenna buuraha hadaan ku tababbarayno buur fuulista, socodka ama socodka. Raac tilmaamahan oo noqo mid fudud oo maalinle ah adigoo tababbaraya jihada saxda ah!
ISKUULADAAGA KU SAABSAN 5 SHAQO
Xusuusnow in ficilku uu sameeyo macallinka, oo sidoo kale jimicso! Waxaan kaaga tageynaa jaangooyooyin 5-aad oo heer sare ah oo aad maskaxda ku hayso markii aad jirkaaga tababareyso isla markaana aad hagaajineyso farsamooyinkaaga dul-socodka.
Haddii aad raacdo nidaamkan si joogto ah waqti kasta (qaadashada taxaddarrada oo dhan) way kuu fiicnaan doontaa inaad hesho gacmaha fuulitaanka gacmaha iyo dhabarka inaad ubaahantahay wax badan
Jimicsi Joogtada ah ee jimicsiga jirka ka hor intaadan seexan
Jiim la’aan? Dhib malahan! Haddii aadan waqti u helin jimicsi inta lagu jiro maalinta, raac nidaamkan fudud ee habeenkii ka hor intaadan sariirta aadin.
Sida looga fogaado Office Syndrome
Waxa loogu yeero syndrome office-ka wuxuu dhacaa kadib saacado badan oo lagu fariisto kombuyuutarka hortiisa. Dad badan oo wax qora, naqshadeeya ama hagaajiya sawirada hal abuurka - iyo hawlo kale - ayaa laga yaabaa inaysan fiiro gaar ah u siinin waqtiga ay ku qaataan kombuyuutarkooda hortiisa. Soo ogow sida ay tani u saameyn karto jirkaaga iyo sida looga fogaado!
Kalluunka la yaqaan 'salmon Norwegian' Cuntad aad u caafimaad leh
Kalluunka salmon wuxuu noqday mid ka mid ah kalluunka buluuga ah ee sida weyn looga cuno adduunka. Kaliya uma aha dhadhankeeda xiisaha leh, laakiin sidoo kale waxay ka kooban tahay nafaqada. Intaa waxaa sii dheer, waa cunno loo diyaarin karo siyaabo badan sababta oo ah dhadhankeeda ayaa si aad ah ugu habboon qaababka karinta kala duwan.
Recipe pancakes caafimaad qab ah oo aan lahayn Saliid Sarreen ah
Ku samee quraacdo macaan ama cuntooyin fudud oo leh qaabsocodkan loogu talagalay Baastada Oka Digaagga ah!
Dad badan ayaa ogaanaya faa iidada ay leedahay in cuntooyinka ku saleysan qamadiga ay lahaan karaan iyo saamayntooda caafimaadka, qaasatan dadka loo yaqaan 'celiac' iyo 'gluten'.
10 muruq ayaa fidsan si ay u bilaabaan tababarkaaga joogtada ah
Waxaan soo bandhignay 10 waqti oo aydnaan iska illoobin ka hor intaadan bilaabin jimicsigaaga caadiga ah. Tani waxay kaa caawin doontaa diirinta muruqyadaada ka hor intaadan ruxin.
5 talo oo looga hortago kansarka indhaha
Halkan waxaa ah shan talo bixin oo kaa caawinaya kahortaga kansarka indhaha. Annaga ayay na saaran tahay inaan sameyno wax kasta oo suurtagal ah si aan u helno caafimaad aad u fiican oo indhaha ka ilaaliya tan iyo cudurrada kale ee saameyn kara indhahayaga.
Dhaawacyada ku saabsan iskeytiga barafka iyo barafka barafka: had iyo jeer way wanaagsan tahay in wax laga ogaado
Dhaawacyada ku saabsan iskeytiga barafka iyo barafka barafka: marwalba way wanaagsan tahay in la is barto Marka lagu jiro xilliga barafka, waxaad wali sii qorsheyn doontaa dalxiis iyo maalmo aad ku qaadaneyso inaad ku raaxeysato barafka iyo jimicsi. Hadday tahay waxaadu tahay baraf boodbood ama baraf baraf ah, maanta waxaan rabnaa inaan si kooban kuu tuso
Sida ay ugu habboon tahay in lagu cayaaro xilliga qaboobaha
Toddobaadkii hore waxaan daabacnay maqaal wadaag wadaag ah oo ku saabsan bilowga barafka. Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa taxane taxane ah oo lagugula talin karo inaad qaab yeelatid kahor intaadan bilaabin barafka xilliga jiilaalka, oo ansax u ah barafka nobel iyo kuwa horeyba khibrada ulahaa. Marka horeba, muruqyada ay tahay inaad inta badan ka shaqeysid waa kuwa